သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် ..
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် ..
1 သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 23rd July 2009, 7:06 am
ကျွန်တော် ပြောတဲ့ နည်း က သူ့ရဲ့ password ကို သိမှ ရမှာပါ ဗျာ ... မသိရင်တော့ မရပါဘူး ... သိခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်က နည်းလေး အတိုင်းလေး စလိုက်ကြရအောင် ...
ကိုယ့် gmail ကိုဝင်လိုက်ပါ ... ပြီးရင် setting ကိုသွားလိုက်ပါ ... ပြီးရင်တော့ account ကိုသွားလိုက်ဦးနော် ...
mail from other account ကနေပြီးတော့ addaanother account ကို click
လိုက်ပါ ... အဲဒီ မှာ ကိုယ် လုပ်ချင်တဲ့ account address ကို ထည့်လိုက်ပါ
ပြီးရင်တော့ နောက် ထပ် တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. အဲဒီမှာ
password ကလေးကိုဖြည့်လိုက်ပါ ပြီးရင် label in incoming massage
အမှန် ခြစ်ကလေး ပေးထားလိုက် နော် .. အိုကေ ပြီးရင် add account ဆိုတာ ကို ပေးလိုက် .. အဲလာ ဆိုရင် gmail ကနေပြီးတော
ကိုယ် နောက်ထပ်ထည့်ထားတဲ့ account ကနေပြီးတော့ ရှိသမျှမေးလ်တွေကို ကိုယ့် account ထဲကို ဆွဲထည့်ပေးလိမ့်မယ်နော် ...
အဲဒီ account ကမေးလ်တွေကိုကြည့်ချင်ရင်တော့ Travel ဆိုတာရဲ့ အပေါ်မှာ ကိုယ် စောစောက ထည့်ထားတဲ့ account ကလေးကို တွေ့လိမ့်မယ် .. အဲလာ
ကလေးကို နှိပ်လိုက် .. တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာ .. အဲ ဒီ account က မေးလ်တွေ အားလုံးကို ... အဆင်ပြေပါစေဗျာ ....
ပြီးရင်တော့ အချိန် ကလေး နည်းနည်း စောင့်လိုက်နော် သူက checking gmail ဆိုပြီးတော့ နောက်ပိုင်း အဲဒီ မေးလ် ထဲက မေးလ်တွေ ကို ယူပေးလိမ့်မယ် ...
2 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 23rd July 2009, 5:36 pm
အဲဒီ့ နည်းကို ဖျက်လို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်...
အခုတော့ မအားလို့ မရေးပေးနိုင်သေးဘူး...
3 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th August 2009, 10:43 am
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-07-24
ဖျက်လို့ရတဲ့နည်းလေးရေးပေးပါဦး အကောင့်တွေပေါင်းပြီးကြည့်တာလိုင်းကအရမ်းနှေးလို့မတက်ဘူးဖြစ်နေတယ် ပြန်ဖျက်ချင်လို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th August 2009, 4:46 pm
ကဲ .. လုံမလေးရေ
G mail Settings - accounts tab ထဲမှာ .. ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အကောင့်ဘေးမှာပေါ့ဗျာ Get mail from other accounts: [You must be registered and logged in to see this link.] ရဲ့ဘေးမှာ delete ဆိုတာရှိတယ် အဲဒီကောင်နှိပ် လိုက်ရင် ရပါပြီ .. လေးတယ်ဆိုကလည်း ဟိုဘက်အကောင့်မှာ စာတွေများနေလို့ပါဗျာ .. စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး ....
5 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th August 2009, 5:20 pm
ကျနော် ဒီပို့စ်ကို မေ့နေတာ...
ရေးပေးမယ်လို့ သာ ပြောထားတယ်.... မရေးးပေးရသေးဘူး
အခုလို ကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့ ကိုနေရိုင်း ကို ကျေးဇူးပါဗျာ...
6 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th August 2009, 5:43 pm
ရှဲ့ရှဲ့ပါ အားကိုကြီးရယ် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
7 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th August 2009, 5:55 pm
$ƴǩǾ wrote: ဟီး
ဖိုရမ်တိုးတက်ရေးပဲဗျာ .. ရပါတယ် .. ဟိုဟာ နှိပ်ပေးလို့ ကျေးဇူး
8 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th August 2009, 6:00 pm
Thanks Post နှိပ်တယ်လို့ ရှင်းရှင်းပြောလေ...
9 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th August 2009, 6:01 pm
lonemalay wrote: ရှဲ့ရှဲ့ပါ အားကိုကြီးရယ် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
ရှဲရှဲဆိုတာဘာလဲဟင် .. မီးလောင်သွားလို့လား .. ခင်လို့နောက်တာနော် ညလေး အဆင်ပြေသွားလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ .. နောက်လည်း မေးနိုင်ပါတယ် ..
10 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th August 2009, 6:04 pm
$ƴǩǾ wrote: ဟီးး
အဲဒါ ပဲ ပြောတာပါ .. တလွဲ မတွေးနဲ့လေ ..နော် .. Thanks Post နှိပ်ပေးလို့ Thanks အယ် ရှုပ်ကုန်ပြီ .. ချော်ကုန်ပြီ ..
11 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th August 2009, 8:12 pm
12 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 11th August 2009, 12:09 am
Thanks Post ကဘယ်နားမှာတုန်းဂျ
13 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 11th August 2009, 4:58 am
အိတုံ ရေ နှိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က နေရာလေးမှာ Thank button ကလေးဘယ်နားမယ် ရှိတယ်ဆိုတာ ပြထားတယ်နော် ... ကြည့်ကြည့်လိုက်ဦး .. အဟဲ ...
Last edited by kohtet on 8th December 2009, 6:30 pm; edited 1 time in total
14 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 12th August 2009, 6:05 pm
ဟီဟိ... Thx button က အကြီးကြီးကိုမတွေ့ကြဘူးကိုး...
15 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 9th October 2009, 8:08 pm
kohtet wrote: ကျွန်တော် ပြောတဲ့ နည်း က သူ့ရဲ့ password ကို သိမှ ရမှာပါ ဗျာ ... မသိရင်တော့ မရပါဘူး ... သိခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်က နည်းလေး အတိုင်းလေး စလိုက်ကြရအောင် ...
ခုနည်းနဲ့သူ့မေးကိုဆွဲဖတ်မယ်ဗျာ။ အဲသူကလဲကျွန်တော့်ပတ်စဝေါ့ကိုသိမယ်ဗျာ သူလဲအဲသည်နည်းနဲ့ကျွန်တော့်မေးကိုယူဖတ်မယ်ဗျာ
ပုံမှန် မေးကိုဒါရိုက်ဝင်ကြည့်တာဆိုသိနိုင်တယ်လေ။ ခုလိုနည်းနဲ့ဝင်ကြည့်တော့အကြည့်ခံရသူက ဘယ်လိုနည်းနဲ့သူစာတွေဝင်ဖတ်နေတယ်ဆိုတာသိနိုင်မလဲ။
16 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 9th October 2009, 9:29 pm
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သိနိူင်လဲဆိုတော့..............အဲဒီလို mail checking လုပ်ထားပြီဆိုရင်အလုပ်ခံထားရတဲ့ account ကို ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နာရီကို တစ်ကြိမ်း check နေပါလိမ့်မယ် ၊ check နေတဲ့ IP တွေကတူနေပြီး တော့ host ပဲကွာပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီလို အချက်အလက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မိမိ mail တွေကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ဖတ်နေတယ်ဆိုတာ သိနိူင်ပါလိမ့် ။ ဘယ်လိုကာကွယ် ရမလဲဆိုတော့............... password ကိုပြောင်းလိုက်ပါ ၊ password ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီအချိန်ကစပြီး
check မလုပ်နိူင်တော့ပါဘူး ။
Last edited by kyawmin on 9th October 2009, 9:38 pm; edited 1 time in total
17 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 10th October 2009, 4:55 pm
Mail ပဲဖတ်ချင်ရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလောက်အထိမလိုပါဘူး
သူ့ password လဲသိနေပြီဆိုတော့ Setting ထဲဝင်ပြီး Auto Forward လုပ်ထားလိုက်ရုံပေါ့။
၀င်သမျှလဲသိရမယ်။ Password ပြောင်းလိုက်လဲ အေးဆေးပဲ။
Gmail ထဲက Setting ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် Forward and POP/IMAG ဆိုတဲ့ Tag ကိုသွားပါ။
ပြီးရင် Forwarding ဆိုတာကိုကြည့်ပါ။အဲဒီမှာ Forwardacopy of incoming mail to ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါရဲ့ဘေးက Text box မှာ ကိုယ်ရဲ့ Gmail Address ထည့်ပါ။ ပြီးရင် အောက်မှာ ဒီမေးလ်ကိုဖျက်မှာလား?၊ Inbox ထဲမှာသိမ်းဦးမလား? ဆိုပြီးမေးတဲ့ Dropdown List ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ Keep Gmail's copy in the box ဆိုတာကို ရွေးပေးပါ။
ပြီးရင်တော့ Save Changes ပေါ့။
18 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 6th December 2009, 4:17 pm
label in incoming massageကနေလုပ်လိုက်တဲ့မေးလ်းကို အဲဒီလူဆီကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်..
အဲဒီလူနဲ့သူနဲ့က အရမ်းမရင်းနှီုးပါဘူး... အဲဒီလူက သူမေးလ်းတွေကိုဖတ်နေတယ်လို့သူ သံသယရှိနေတယ်.. အဲဒါကို သူမေးလ်ထဲကနေပြီး... ဖျက်လိုက်လို့ရမလာ.... အဲဒီလူက မဟုတ်ဘူး.. လို့အတင်းခံညင်းနေတယ်..တဲ့... ခံရတဲ့သူက မိန်ကလေးဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်ကို မေးနေလို့ပါ.. ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်.. အဲဒါကြောင့်သိ၇င်ကူညီကြပါ
19 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 6th December 2009, 6:29 pm
ပြောတာနည်းနည်း ရှုပ်သွားတယ် .. ဘာပြောမှန်းကို မသိဘူး [You must be registered and logged in to see this image.] အပေါ်က ကိုထက်လုပ်သလိုမျိုးလား မသိဘူး ဒါဆိုရင်တော့ အောက်မှာ
ကို နေရိုင်းပြောတာလေး နဲ့ ပြန်ဖျက်ကြည့်လေ .. တကယ်လို့ သံသယရှိရင်တော့ အဲဒီ Label ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပေါ့ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
20 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 8th December 2009, 9:24 am
[You must be registered and logged in to see this link.] ပြောသလိုလုပ်လိုက်ရင်.. အလုပ်ခံရတဲ့လူဆီကို send verification လုပ်လိုက်ရင် မေးလ်တစ်စောင်ရောက်ပါတယ်.. google team ကနေပို့တာပါ.. အဲဒီမှာ လက်ခံမှာလား လက်မခံဘူးလားရယ်.. ကွန်ဖန်းလုပ်တဲ့ ကုဒ်နံပါတယ်ပါပါတယ်.. အဲဒီနံပါတ်ကို လုပ်တဲ့လူက ပို့ပေးဘို့တောင်ဆိုလာတယ်.. သူကလည်း စာမဖတ်ဘဲ.. ပြန်ပို့လိုက်တာပေါ့.. အခုသူအကြောင်တွေကို လာပြီးမေးမေးနေလို့တဲ့... ကျွန်တော်လည်း.. ဒီမှာကိုထက်ပြောတဲ့ဟာကို ဖတ်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်မိတော့ သူစိတ်ပူသွားပြီး.. အကူအညီတောင်းလို့ပါ... ကျွန်တော်ပြောတာမရှင်းရင် ကျွန်တော် တစ်ဆင့် ဓာတ်ပုံနဲ့ပြန်တင်ပေးပါမယ်..
21 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .. on 9th December 2009, 5:06 pm
အနော်ကို ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်တော့ဘူးနော်.. သိရင်ပြောပြကြပါဗျာ..
22 Re: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် ..